RW Cumar oo dedaal ugu jira sidii xayiraadda looga qaadi lahaa xawaaladaha Soomaaliya ee USA – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: R/wasaaraha Soomaaliya, Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke ayaa sheegay inuu dedaal ku bixinayo sidoo xayiraadda looga qaadi lahaa Xawaaladaha Soomaaliya ee dalka Mareykanka, kuwaasoo xirmay labo maalmood ka hor kadib markii Banki Mareykan ah oo koontooyin uga furnaayeen uu xiriirka u jaray.
RW Cumar oo ka hor inta aan xilkaan loo magacaabin ahaa danjiraha Soomaaliya u fadhiya Mareykanka, ayaa sheegay in xirida xawaaladaha ay saameyn xun ku yeelan karto xaaladda dadka Soomaaliyeed.
Wuxuu sheegay Sharma’arke inuu dowladda Mareykanka kala hadlay arrintan si ay dambiyada dib ugu eegaan go’aanka ay ka qaateen xawaaladaha, isla markaana ay dib ugu billaabaan xiriirka ay la leeyihiin xawaaladaha si howshu u sii socoto.
“Waxaan si shaqsi ah ugala hadlay dowladda Mareykanka arrinta la xiriirta xawaaladaha Soomaalida iyo xiriirka kala dhexeeya bangiyada Mareykana ku yaalla. Tanina waa qorshe aan ku doonayno in bangiyada Mareykanka ay dib u eegaan go’aanadooda ayna sii wadaan xiriirka ay la leeyihiin xawaaladaha Soomaalida. Ma jiro qof moog in nidaamka xawaaladaha lacagta ay muhiim u tahay waddamada soo koraya; loona baahan yahay inaad si wanaagsanna loo fahmo caqabadaha ay dowladahaas ku keeni karto tallaabadan. Aad baan u doonayaa cudurdaarka jira, waxaana naga go’an inaan inaan sameyno wax walba oo aan awood sidii xal waara oo sharci ah loogu heli lahaa lacagaha la soo diro,” ayuu Sharma’arke ku yiri war-saxaafadeed uu soo saaray.
Ra’iisul wasaaraha Somalia ayaa intaas ku daray. “Xaaladdan waa mid nagu haysay walaac xooggan muddo sannado ah oo aanu u baahan-nahay inaanu u helo xal waara si ay u soo socdaan xawaaladaha dibadda laga soo dirayo oo ah mid badbaado u ah shacabka dalka gudihiisa ku nool.”
RW Cumar ayaa intaas ku daray inay dowladda Somalia la tacaalayso sidii caqbadaha amni ee dalka ku hor-gudban uga wareejin lahayd, isagoo xusay in xaaladda amni ee dalka iyo dib u soo noqoshadiisa ay tahay mid meel aad u wanaagsan maraysa.
“Nidaam dhaqaale oo xooggan iyo bangiyo shaqeeyay ay Somalia baahi weyn u qabtaan, si lacagaha ka imaanaya xawaaladaha loogu helo nidaam fiican oo lacaguhu soo mari karaan, balse nasiib-darro weli taas kama jiro dalkeenna. Laakiinse waxaan codsanayaa in si deg-deg ah arrintaas loo dar-dargeliyo si loo hirgeliyo hanaan cusub oo lagu taageero malaayiin Soomaaliyeed oo ku tiirsan dhaqaalaha dibadda uga yimaada,” ayuu Cumar C/rashiid mar kale yiri.
Ugu dambeyn, ra’iisul wasaaraha Somalia ayaa yiri. “Xaaladda Soomaaliya dib ayaa loo hagaajinayaa, waxaana ka dalbanayaa dhammaan dalalka aan saaxiibka nahay iyo beesha caalamka inay sii wadaan taageerada ay dadka iyo dowladda Soomaaliya siinayaan. Xawaaladaha ma ahan tan keliya ee aan doonayno in wax laga qabto, balse waxaanu doonaynaa in qoysaska la siiyo taageero tabarucaad ah oo ka caawisaa inay ka gudbaan ku tiirsanaanta ay ku tiirsan yihiin gargaarka dibadaha ka yimaada.
Cumar C/rashiid ayaa xusay in haddii go’aanka bankiyada Mareykanka ay xiriirkii ay la lahaayeen xawaaladaha Soomaalida ugu jareen ay ku adkeystaan ay taasi keenayso inay shacabka Soomaaliyeed waayaan inay kirooyinka iska bixyiaan, cunno iyo dharna ay soo iibsan waayaan, adeegyada caafimaadna ay awoodi inay helaan, carruurtoodana ay u diri waayaan iskuullada.
Baanka Mareykanka ah ee culeyskaas dusha u saaray Soomaalida dalka Mareykanka ayaa ku andacooday inuu ka baqayo inuu ka qabto sharciga waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada ee dalkaas, sidaas darteedna uu xawaaladaha Soomaalida xiriirka ugu jaray.